အိပ်ခန်း ထဲမှာ ပန်ကာ ကိုမသုံးသင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း...! - Thadin
HomeHEALTHYအိပ်ခန်း ထဲမှာ ပန်ကာ ကိုမသုံးသင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း…!
အိပ်ခန်း ထဲမှာ ပန်ကာ ကိုမသုံးသင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း…!
February 12, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on အိပ်ခန်း ထဲမှာ ပန်ကာ ကိုမသုံးသင့်တဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း…!
လူအများစုကနွေရာသီဆိုရင်အိပ်ခန်းထဲမှာပန်ကာကိုထားတတ်ကြပါတယ်အိပ်စက်တဲ့အခါသာမာန်အပူချိန်16′ နဲ့18’Celsius ကြားထဲမှာပဲအိပ်စက်သင့်ပါတယ်ပြင်ပအပူချိန်က၂၀’အောက်မလျော့နည်းဘူးဆိုရင်သင့်အိမ်ကိုနည်းနည်းအေးအောင်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်အိပ်ခန်းထဲမှအေးမြတဲ့လေရဖို့အချို့တွေကပန်ကာတပ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ပန်ကာကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ လူတိုင်းကတော့ပန်ကာအသံကိုမနှစ်သက်ကြပါဘူး။ အများစုကတော့ပန်ကာအသံကိုနေသားကျနေကြပါတယ်။အေးမြတဲ့လေကအိပ်ပျော်စေဖို့ပိုလွယ်ပါတယ်။
ပန်းနာရင်ကျပ်၊အလက်ဂျစ်ထတာနဲ့မျက်လုံးခြောက်သွေ့တာတွေဟာအိပ်ခန်းထဲမှာပန်ကာရှိရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ အေးမြတဲ့လေကြောင့်ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒါဟာကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။ အိပ်စက်ခြင်းကိုအကြံပေးတဲ့ပညာရှင်မက်ခ်ရက်ဒစ်(Mark Reddick) ကလူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Credit: Daily Hot News
လူအမ်ားစုကေနရြာသီ ဆိုရင် အိပ္ခန်းထဲမွာပန္ကာကိုထားတတ်ကြပါတယ်အိပ္စက္တဲ့အခါသာမာန်အပူခ်ိန်16′ နဲ့18’Celsiusျကားထဲမွာပဲအိပ္စက်သင့်ပါတယ်ျပင္ပအပူခ်ိန္က၂၀’အောက္မေလ်ာ့နည်းဘူးဆိုရင်သင့်အိမ္ကိုနည်းနည်းအေးအောင်ျပုလုပ်သင့်ပါတယ်အိပ္ခန်းထဲမွေအျးမတဲ့လေရဖို့အခ်ို့တြေကပန္ကာတပ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ပန္ကာကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။ လူတိုင်းကေတာ့ပန္ကာအသံကိုမနွစ်သက်ကြပါဘူး။ အမ်ားစုကေတာ့ပန္ကာအသံကိုနေသားက်နေကြပါတယ်။အေျးမတဲ့လေကအိပ်ပေ်ာ်စေဖို့ပိုလြယ္ပါတယ်။
ပန်းနာရင္က်ပ် ၊အလက္ဂ်စ္ထတာနဲ့မ်က္လုံျးေခာက်သြေ့တာတြေဟာအိပ္ခန်းထဲမွာပန္ကာရွိရင္ပိုဆိုးပါတယ်။ အေျးမတဲ့လေကြာင့်ပိုဆိုးစေပါတယ်။ ဒါဟာက်န်းမာရေးအတြက္မေကာင်းပါဘူး။ အိပ္စက်ျခင်းကိုအကြံပေးတဲ့ပညာရွင္မက္ခ်ရက္ဒစ်(Mark Reddick) ကလူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူကြောင်ျးေပျာပခဲ့ပါတယ်။
နို့ဆီကို နွားနို့ကနေ ရတယ်လို့ အခုထိ ထင်နေကြတုန်းပဲလား ..?
သင့်ကိုမချစ်တော့တဲ့သူကို တွယ်ကပ်နေမယ့်အစား ဒီနည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီး စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ…,,,
This Month : 34941
This Year : 176398
Total Users : 535422
Total views : 2421079